Duqa Galkacyo oo maanta booqday dadkii ku dhaawacmay rabshaddii magaalada ka dhacay. – Radio Daljir
Duqa Galkacyo oo maanta booqday dadkii ku dhaawacmay rabshaddii magaalada ka dhacay.
Galkacyo, Oct 31 – Duqa magaalada Galkacyo C/raxmaan Maxamuud X. Xasan ayaa maanta booqday cisbitaalka GMC ee magaalada Galkacyo, halkaasi oo ay jeefaan dadkii dhaawacmay iska-horimaadkii khamiistii la soo dhaafay ka dhacay suuqa magaalada Galkacyo.
Md. C/raxmaan ayaa dadkaasi gaarsiiyey deeqo lacageed maamulka degmadu ay u qoondeeyeen, waxaana lacagahaasi si siman loo gaarsiiyey dadkii ku dhaawacmay rabashadii ka dhacday magaalada Galkacyo maalintii darraadto ahayd, iyo dadkii kale ee bukaan ahaa ee isbitaalkaasi jiifay.
Shir jaraa?id oo uu duqu ku qabata halkaasi ayaa wxaa uu ugu mahadceliyey maamulka iyo shaqaalaha isbitaalkaasi ka hawlgala oo uu sheegay in ay dadaal dheer u galeen dadwaynta iyo daryeelidda dadkii dhaawaca ahaa.
Dr C.qaadir Maxamuud Jaamac Dhaga-cadde oo ah guddoomiyaha isbitaalka GMC, ayaa isna waxaa uu u mahadcelieyey shaqaalaha isbitaalka oo uu sheegey in ay karti dheeraad ah ay muujiyeen isla markaana ay wakhti badan u hureen la tacaalidda dadkii dhaawacyada qabay.
Dhanka waxaa maanta si rasmi ah u bilowday howlihii burburinta goobaha sharci darrada ah ee ku yaallay Suuqa ee magaalada Galkacyo iyo bartamaha magaalada kuwaasi oo ay ku hawlaneyd dawladda hoose degmada Galkacyo dhowrkii maalmood ee ugu danbeeyey.
Shaqaadan burburinta goobaha sharci darrada ah iyo bannaynta waddooyinka suuqa magaalada ayaa ahaa kuwo bilowday 29 bishaan hase ahaatee waxaa hakid ku yimid kadib markii maalintii khamiista ahayd ee todobaadkii la soo dhaafay burburtinta goobahaas uu ka dhashay iska horimad dad ku dhintay kuwo kalana ay ku dhaawacmeen.
Waxaana waanwaan iyo wada hadal dheer oo ay wadeen ganacsatada iyo waxgaradka magaalada lagu guulaystay maanta shaqadii burnurtinta goobaha sharci darada ah iyo bannaynta waddooyinku in ay dib u bilaabato.
Shaqadaasi maanta waxaa ku hawllanaa isla markaana goobaha burburinayey ganacsatada magaalada oo si is xilqaan ku jiro u bilaabay in ay burburiyaan goobaha ganacsi ee sida sharci darrada ah ku dhisan, halkii horay ciidanka degmadu ay farahood ku jajabinayeen dhismayaashaasi.